Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » कोरोना सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ
कोरोना सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ
कोरोना भाइरस सङ्‌क्रमण (कोभिड-१९) फैलनबाट रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन सुरु गरेको दुई दिन बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै सरकारले आफ्नो लागि नभएर देश र जनताका लागि यो कदम चालेकाले सबैले साथ दिनुपर्ने बताएका छन्।
जीवन जोगाउने विषय भएकाले सबैले राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर यो महामारीविरुद्ध लाग्नुपर्ने उनले बताए। सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या र अवस्था हेरेर सरकारले लकडाउनबारे निर्णय हेरफेर गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारको कदम तत्कालका लागि हतारिएरभन्दा पनि सतर्क भएर अगाडि बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छ,’ रिमालले भने, ‘ अहिलेलाई लकडाउन सात दिन भनेका छौं। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएअनुसार सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ।’
लकडाउनपछि अवस्था र सतर्कताका लागि भावी सरकारी कदमबारे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालसँग नेपालन्युजका छत्र कार्कीले गरेको कुराकानीको अंशः
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीपछि हिजोदेखि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको छ। पहिलो दिनको लकडाउन सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार भयो?
हिजोको लकडाउन पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभएको जस्तै मूल रूपमा सफल नै रह्यो। जनताले सरकारको भनाइलाई साथमा लिइदिए। तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकमा भएको अवज्ञालाई हेर्दा हाम्रो देशमा जनताले सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरिदिए।
यसो हुनुमा एउटा त, चेतनाको कारणले पनि हो। अर्को, यो महामारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा मापन गर्न बाँकी छ। ठुल्ठूला देशमा महामारीको अवस्था यस्तो छ भनेर मापन त गरिन्छ, तर त्यहाँ पनि त्यसअनुसार मिलिरहेको हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले लकडाउन गरेका थियौं। मलाई लाग्छ- हिजो जनताले राम्रो साथ दिनुभयो, सरकारको आग्रहप्रति राम्राे प्रतिक्रिया जनाउनुभयो। यसले राम्रै प्रभाव पारेको छ।
तपाईंले महामारीको अवस्था मापनको कुरा उठाउनुभयो, यसको मापन सरकारले कुन रूपमा गर्ने गरेको छ?
यो सङ्‌क्रमण चीनको उहानमा देखिनेबित्तिकै हाम्रो देशमा एउटा केस आएको थियो। चीनबाटै आएको एक व्यक्तिमा उक्त केस देखिएको थियो। त्यो केस निको पनि भयो। र, यो सङ्‌क्रमणको सङ्‌केत विश्वभर नै देखिसक्दा पनि नेपाल ‘ग्रीन जोन’मा रहेको देश हो। त्यसपछि पनि देशभित्रै सङ्‌क्रमण भएको केस देखिएको छैन।
यद्यपि, अन्य ६-७ सयजनामा परीक्षण गर्दा ‘‘इम्पोर्टेड केस’ अर्थात् विदेशबाट आउनेहरूमा मात्रै यो केस भेटिएको छ। नेपालमा कोभिड-१९ को दुईवटा मात्र केस देखिएको छ अहिलेसम्म। त्यसमा पछिल्लो केस फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा देखिएको हो।
तसर्थ, हामीकहाँ देशभित्रैबाट उत्पन्न भएको खालको सङ्‌क्रमण देखिएको छैन, जुन सकारात्मक कुरा हो। तर, सबैतिर जङ्‌गलमा आगो लागेका बेलामा एउटा रुख मात्रै सुरक्षित हुन्छ भनेर कल्पना गर्नुचाहिँ आत्मरतिमा बस्नुजस्तो हुन्छ।
त्यसकारण अब चाहिँ विदेशबाट आउनेमा देखिने सङ्‌क्रमणले पार्नसक्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने सोचेरै सरकारले लकडाउन गरेको हो। र, अहिलेको लक डाउनबाट हामी कुन ठाउँमा यो सङ्‌क्रमण फैलिनसक्छ, कुन क्षेत्रमा फैलिँदैन भन्ने कुराको सम्भावित पूर्वमूल्याङ्‌कन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हो।
गत डिसेम्बरमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोभिड-१९ को सङ्‌क्रमण विश्वव्यापी भएको छ, नेपाललाई सबैभन्दा बढी जोखिम हुने क्षेत्रको बारेमा सरकारले केही ‘एसेस्मेन्ट’ गरेको छ?
खासगरी मैले अघि पनि ‘इम्पोर्टेड’ अर्थात् अयातीत केस भन्ने कुरा गरेँ। बाहिरबाट नेपाल आएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू वा पर्यटकका रूपमा यहाँ घुम्न आएका विदेशीहरू यदि सङ्‌क्रमित भएर आउनुभएको रहेछ भने त्यसबाट नेपालमा पनि सङ्‌क्रमण फैलिन्छ भन्ने हामीलाई डर हो। हाम्रो देशबाट कोरोना सङ्‌क्रमण उत्पन्न नभएकाले यहीँबाट फैलिने सम्भावना त केही कम हुने भयो नि!
तर, कस्तो हुन्छ भने विदेशबाट आएको कसैमा सङ्‌क्रमण देखिएको रहेछ भने उसैले यो सङ्‌क्रमण फैलाउने हो। को कुन व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रह्यो भन्ने कुराले यसलाई फैलाउने हो। त्यसैले, बाहिरबाट आउने नेपाली वा गैरनेपालीहरूमाथि नै बढी निगरानी गर्ने अनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कुरामा हामी लागेका छौं। यसरी जाँचलाई प्रभावकारी बनाएर, सतर्कता अपनाएर मुलुकलाई सङ्‌क्रमणको मारबाट जोगाउन सक्छौं भन्ने लाग्छ।
पछिल्लो समय भारतमा कोभिड-१९ सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, तर, लकडाउन भने पनि नेपाल र भारतबीच खुला सिमानामा आवतजावत पूर्णरूपले बन्द भइसकेको छैन। यसले जोखिम ल्याउँदैन?
भारतसँगको सिमाना आजबाट पूर्णरूपले लकडाउन हुन्छ। भारत सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा राम्रै अनुगमन गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्दा भारतका कतिपय सहरमा भएको अवज्ञालाई उल्लेख गर्नुभएको छ।
आजबाट भारतमा सुरु हुने लकडाउनलाई लिएर मोदीले ‘यदि कसैले २१ दिने लकडाउन अवज्ञा गर्नुभयो भने २१ औं वर्षसम्म पछि पर्नसक्छौं’ भनी चेतावनीसहित सचेत पार्नुभएको छ।
हामीलाई पनि विभिन्न कूटनीतिक निकायबाट खबर आएको छ, भारतमा पूर्ण लकडाउन हुने भएकाले दुवैतिरका अधिकारीले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। त्यसकारण मेरो विचारमा भारत र नेपाल सिमानाको आवतजावत पूर्ण बन्द हुन्छ भन्ने लाग्छ।
पहिलो दिन लकडाउन उल्लङ्‌घन गर्ने केही पक्राउ परे भन्ने समाचार आएका छन्। अब सरकारले यसलाई अझै कडा रूपमा नियन्त्रण गर्छ कि अन्य उपायबाट अगाडि बढ्छ?
सरकारले निरन्तर सन्देश प्रवाह गरिरहेकै छ। यद्यपि, व्यवहारमा पनि त्यो लागू हुनैपर्छ। बुझेका-जानेका मान्छेले सामाजिक सञ्जाललगायतमा लेखेर पनि लकडाउनलाई पालना गर्न सचेत पार्नुपर्छ, सतर्कता बढाउने खालका सामग्री प्रचार-प्रसार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।
त्यसमा पनि कतिपय नेपालीको स्वभाव अलि बेग्लै खालको छ, बाहिर कर्फर्यु लागेर गोली चलेको समयमा पनि हेरेर आउँछु भन्ने किसिमको पनि छ। हाम्रो मानवीय स्वाभावका कारणले पनि अहिले लकडाउन कतिपयले पालना नगरेको देखिएको छ। तर, यो गम्भीर हेलचक्र्याइँ हो, यस्तै गल्तीले गर्दा भोलि सङ्‌क्रमण नफैलिएला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन।
आज बिहान परराष्ट्रमन्त्रीले एउटा मिडियासँग कुरा गर्नुभएको रहेछ, त्यहाँ उहाँले यो भाइरसबाट कोही आफन्तको मृत्यु भएमा लासको छेउ जान नमिल्ने स्थिति आउँछ भन्नुभएको सुन्दै थिएँ।
त्यसकारण म पनि सबैलाई आग्रह गर्छु- यो गम्भीरतालाई ख्याल गर्नुस्। जनतालाई सरकारले सुसूचित गराइरहेको छ, उहाँहरूले यो बुझिदिनुभयो भने जथाभावी बाहिर हिँड्ने क्रम रोकिएला।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन एक सातापछि हट्छ कि पुनः अवधि थपिन्छ?
यो साता हामी बिरामीको रेकर्ड कस्तो हुन्छ भनी हेरेर यसको मूल्याङ्‌कन गर्छौं। फ्रान्सबाट आएकी एकजना बहिनीमा यसको सङ्‌क्रमण देखियो, उहाँको रेकर्ड के हुन्छ? उहाँको परिवारमा कस्तो अवस्था कस्तो देखिन्छ? यसबारे बुझ्छौं।
साथै, कतार एयरवेजबाट ती बहिनीसँगै आएका अन्य मानिसमा कस्तो प्रभाव परेको छ भनी जानकारी लिन्छौं।
यी सबै कुराको मूल्याङ्‌कनपछि मात्र के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। सँगै यस अवधिमा नयाँ कति केस देखापर्छन् भन्ने कुरामा पनि यो निर्णय निर्भर रहन्छ।
नयाँ केही केस रेकर्ड भएन, सङ्‌क्रमितको घरमा पनि कसैलाई पनि सङ्‌क्रमण देखिएन भने हामीकहाँ भारतले अपनाएको भन्दा केही पृथक तरिका अपनाउन सकिएला।
तर, सरकारको कदम तत्कालका लागि हतारिएर भन्दा पनि सतर्क भएर अगाडि बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छ। अहिलेलाई लकडाउन सात दिन भनेका छौं। हेर्दै जाऔं। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएअनुसार यदि सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ।
अन्त्यमा, कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
यतिखेर सरकारले भनेका कुरालाई अवज्ञा नगरौं। सरकारले हामी सबैको लागि, जनताका लागि बोलिरहेको छ। सरकारले आफ्नो लागि नभएर देश र जनताका लागि यी आग्रह गरिरहेको छ।
अरु बेला राजनीतिक विषयमा आग्रह-पूर्वाग्रह हुनसक्छ, विचारधारा तलमाथि हुनसक्छ, सरकार मन पर्ने वा मन नपर्ने हुनसक्छ। तर, यतिबेला सरकार बलियो बन्नु र सरकारको कुरा सुन्ने भनेको हाम्रो जीवन जोगाउने कुरा हो।
त्यसकारण, सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन र विज्ञले कोरोना सङ्‌क्रमणबाट फैलनबाट रोक्न दिएका सुझावलाई पालना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यो समयमा हडबडभन्दा पनि संयमका साथ सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। तर, आतङ्‌कित हुन पनि जरुरी छैन।
हामीले यदि आफैंलाई आफ्नो घरभित्रै राख्यौं, र, चिकित्सक तथा प्राविधिकले दिएको निर्देशन पालना गर्‌यौं भने यो कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ जित्न सक्छौं। त्यसले यो समयमा हरेक जनताले घर-घरमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने आह्वानसँगै मेरो आग्रह पनि हो।
कोरोना सङ्‌क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए लकडाउन लम्बिनसक्छ : विष्णु रिमाल